Allgedo.com » Guddi dowladda Ingiriiska kula taliyay in aan Qaadka la joojin (Daawo Video)
Guddi dowladda Ingiriiska kula taliyay in aan Qaadka la joojin (Daawo Video)
Dhigimaayo weligey rajada, hankeygana ka ilaashey quus!
Gudiga loo xilsaaray inay dowlada Ingiiska kala taliyaan arimaha daroogada ee loo yaqaan Advaisory counsel misuse of drugs (ACMD) ayaa shalay baarid dheer kadib kasoo saaray warbixin ay kula talinayeen dowlada Ingriiska inaan qaadka la joojin iyagoo ku tilmaamay inuusan qaadku haba yaraatee wax dhibaato ah ku hayn bulshada Soomaaliyeed.
Waxaa xusid mudan in isla gudigaani ay bishii Oktoober ee sanadkii 2010kii ay soo saareen warbixin ay dowladda Ingiriiska kula taliyeen in la mamnuuco daroogada loo yaqaan (miaw-miaw) ama Methodren oo ah kaniini laga sameeyo dheecaanka qaadka kasoo ay cuni jireen dhalinyarada cadaanka ah.
Gudigaan oo caadaystay hadii aysan daroogadu dhibaato ku hayn dadka cadaanka ah inay iska dhayalsadaan ayaa waxaa lagu eedaynayaa inay yihiin kuwo aan dhowrayn xaquuqda dadka madmadoow.
Waxaa kaloon meesha ka maqnayn dowlada Kenya oo ergo usoo dirtay dalkan Ingiriiska kana codsatay rag gudiga ku jira inay u hiiliyaan, ragasoo aan hada ku eedaynay (conflect of interest) aan ahayn kuwa arinta ka dhex-dhexaada.
Waxaa kaloo iyana xusid mudan inaysan dowladau weli go’aan gaarin, qasabna maaha inay qaataan talada gudigaan. Dowladu waxay xaq ama sharci ahan u leedahay inay talada gudigaan diido oo ay go’aan ka dhan ah in qaadka lajoojiyo soo saarto bilaha soo socda.
Ugu danbayntii, hadaanu nahay bahda la dagaalanka qaadka dhigimayno weligayo rajada, hankayagana ka ilaalinay quus, go’aanka shalay soo baxayna wuxuu ahaa dharbaaxo nalaku dhuftay oo na turaan turaysay, laakiin fariisanmayno, harsan mayno, dagaalkana waa wadaynaa inta naftu nagu jirto guushuna dhankayagay ahaan hadii Alle idmo. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhamaan taageerayaasha ololahaan.
Video-ga hoose ka daawo halka uu maraayo la dagaalanka Qaadka: